Valve inotangisa Steam Labs, nzvimbo yekuratidza miedzo mitsva | Linux Vakapindwa muropa
Valve yakagadzira Steam Labs, chikamu cheSteam yeValve uko icharatidza zvimwe zviedzo zvavari kuita kuitira kuti ugone kuvaziva, kuvaedza uye nokudaro ukwanise kumhan'ara matambudziko ekuvandudza iwo. Ivo vari kuvandudza iyo yese Steam nharaunda nezvakawanda maficha maficha, uye imba yeaya ese iwo mabvunzo anozove Steam Labs yenguva yekuyedza. Pasina kupokana, inhau dzakanaka kuziva kuti vane chishuwo chekuvandudza nekuenderera mberi nekuwedzera maficha, uye zvakare kuziva kuti isu tichazokwanisa kuvaedza uye kuziva nezvavo pamberi pekutanga kwekupedzisira.
Izvo Valve inotarisira neSteam Labs ndeyekuti iwe unogona kudyidzana nekuedza kwavo uye kuratidza maonero ako pamusoro pekuti zvakakosha here kuenderera pamwe nezvakaitika izvi, uye kana uchizvida, taurawo zvaunofunga nezvekuti chirongwa ichi chinofanira kushanduka kana zvaungade kuti chive. Muchokwadi, kana iwe uchida kuziva zvakawanda uye ukaona ekutanga kuyedza, iwo atove kuwanikwa pa peji ino.
Panguva ino vatovepo kumwe kuyedza kuri kuratidzwa kuruzhinji. Valve yaida kugovana izvi zvitatu zvirongwa newe:
Micro Trailers: tirera yechipiri yetanhatu pamutambo wega wega. Chimwe chinhu chipfupi asi chakaringana kukupa iwe pfungwa yeiyo mutambo wevhidhiyo uri pasina kuona vhidhiyo yakati rebei.
Inopindirana Inokurudzira- Iyi "yekudzidza muchina" yekukurudzira sisitimu yekuratidza mitambo yaungade iwe uchishandisa Steam. Kunyangwe Valve akataura kuti iyo nyowani yekurudziro system haizokwanise kupa mitsva yemavhidhiyo mitambo iyo isati iine vatambi, nekuti haina ruzivo rwekuziva nezvavo. Asi mushure memazuva mashoma uchitora data kubva kwavari, iwe unozogona kuzviita.
Otomatiki Ratidza: Iyi vhidhiyo yemazuva ese inogadzirwa kuti iratidze mitambo yevhidhiyo inozivikanwa.
Izvo zvinoita Valve yakanyanya kuvhurika uye icho chinhu chinonakidza kune vashandisi. Pakupera kwezuva, iwo mabasa kwavari uye vari nani kupfuura ivo kuti vazive kana vachida chimwe chinhu kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Valve inotangisa Steam Labs, nzvimbo yekuratidza miedzo mitsva
AMD Zen 2 inouya kuKymera Slimbook